3 Solutions Free si Buuga Taleefanada ee kaabta Si fudud
Buuga Taleefanada waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee aynu wada helay taleefanka. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee telefoonka, sababtoo ah waxaa ku jira xiriiro. Xiriirada badbaadiyey lagu qorin tegi kartaa maqan labada by iyaga la tirtiro ama telefoonka ah laga badiyay. Backing aad qorin noqon karaa mid aad waxtar u leh. Sida gurmad kale oo kasta, waxaad si fudud u yeelan karaan in ay helaan xiriirada aad ka dib markii iyaga laga badiyay. Gurmad Buuga Taleefanada in ay hawsha loo isticmaalo, laakiin hadda, waxaa jira siyaabo kala duwan si ay gurmad aad qorin. Si fudud Waxaad gali kartaa qorin in aad email ama isticmaal app ah in ay dib u kor xiriirada si aad kaarka SD, WordPress, Google ka eryi iwm
1. Super kaabta
Super kaabta ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idea.backup.smscontacts ) app waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee ay gurmad qorin. Waxaa la sheegay in uu noqdo aalad dhaqsiyaha badan gurmad u android. Sida ugu qalab gurmad, waxa ay sidoo kale taageertaa gurmad macluumaad kale sida SMS, Calendar, iwm Waxay leedahay labada qeybood oo lacag la'aan ah iyo mushaarka la version bixisay siinayo qaababka badan version xorta ah.
Xiriirada kaabta, barnaamijyadooda, fariimaha, abuse wac, Bookmarks iwm in kaarka SD, Gmail ama Google Drive.
Waxaad sameysan kartaa gurmad si toos ah iyo si toos ah u la gelin doonaa in Gmail ama Google Drive.
Halkii ilaa taageero oo dhan hal mar, waxaad dooran kartaa wada hadalka SMS ama xiriirada aad rabto in aad dib u up.
Soo Celinta wax kasta oo aad xoojiyaa meel kasta aad rabto iyo markasta oo aad rabto.
App bandhigayaa xayeysiis in dadka isticmaala iyo kuwa isticmaala u baahan yihiin si ay kor si Pro in laga takhaluso xayeysiiska.
2. CM kaabta
CM kaabta ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ijinshan.kbackup ) waa qorin gurmad app ah oo bixiya 5GB ee kaydinta daruur lacag la'aan ah. Users gurmad xogta ay ay server kartaan oo aad marin karaan mar walba oo ay rabaan. Tan iyo 5GB idiinku dhib badan tahay gurmad kaliya qorin, ay taageerto SMS, Photos, iyo hayaan kale ka telefoonka.
Wax walba oo kaabta oo ay la socdaan xiriirada aad oo ay ku jiraan dhalashada, avatars iwm
Gurmad iyo soo celiyo si dhakhso xawaaraha.
Taageerada kala iibsiga aamin xogta iyo kaydinta on servers Amazon S3.
Kaabta CM taageertaa gurmad si toos ah maalin kasta.
Xogta kaabta waxaa laga daawan karaa online internetka.
Waxay qaadataa oo keliya mid ka mid tuubada in gurmad xog kasta oo ku saabsan qalab aad.
Waxa aanu soo celiyo wax walba oo xoojiyaa.
3. MC kaabta
MC kaabta ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globile.mycontactbackup ) waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud in ay gurmad iyo soo celinta aad qorin. Wax macno ah ma u baahan tahay kombiyuutar kasta ama .Wadashaqayntaas in ay ka shaqeeyaan. Kaabta badbaadiyey ee qaab .vcf iyo ka dib aad si aad email u fudud u helaan gudbin karaan gurmad ah.
MCBackup ma u baahan tahay inaad u hagaagsan in server kasta in ay dib u ilaa aad xiriirka la leedahay. Waxaad aad xiriirka la leedahay raad raac iyo markaas email u diri kartaa file gurmad naftaada si loo isticmaalo mustaqbalka.
Mar kasta oo aad rabto in la soo celiyo xiriirka la leedahay, uma baahnid inaad app kasta oo ay sameeyaan in, wax yar ka soo bixi file gurmad iyo soo dejinta si aad xiriirka la leedahay.
Your gaarka ah waa la damaanad qaaday iyadoo MCBackup. Your buug cinwaanka waa aamin oo xasiloon iyo xiriirada aad doonto ma laga heli.
Jadwalka gurmad aad u ogolaanaya in ay xiriir gurmad usbuuc walba ama bilwalba.
Waxaad si fudud nuqul karaan gurmad ka telefoonka si aad u computer aan la isticmaalayo app kasta.
Saar nuqul ah.
Qalab ugu fiican ee gurmad u maamuli lahayd qorin waa Wondershare MobileGo . Wondershare MobileGo waa qalab aad u awood kuu ogolaanaya inaad si ay u maareeyaan iyo xakameeyo wax kasta oo aad telefoonka ku haboon ka hal meel. Waxa ay taageertaa macruufka iyo qalabka Android labadaba. Backing kor, dib u soo celinta iyo maaraynta buugga telefoonnada uu mar walba si sahlan ula MobileGo Wondershare duwan software kale oo kasta.
Features ee Wondershare MobileGo
Waa aalad awood leh in wax fudud inaad kala soo baxdo, soo dejinta, dhoofinta iyo maamuli lahayd photos, videos, music iwm hal meel kaliya riix ah badhan.
Tayadoodii iyo maarayn mobile aad si fudud MobileGo Wondershare. Saar xiriirada nuqul, maareeyaan Apps iyo gurmad iyo soo celin telefoonka si fudud.
Kabsado files lumay iyo helitaanka qarsoon iyo xidid files aad telefoon kula Wondershare MobileGo.
Orod barnaamijyadooda aad, ciyaaro kulan, cid dir oo soo heli SMS aad kombuutarka halkii aad telefoon kula jirin xayiraad la MobileGo Wondershare.
Mirror qalab aad si aad u computer.
3.812.255 oo qof ayaa u soo bixi
Import Xiriirada la Wondershare MobileGo
Iyadoo MobileGo Wondershare, waxaad si fudud u dajiyaan karaa iyo dhoofin aad xiriirka la leedahay. Waxaad edit karaa, midowdo xiriirada nuqul oo xitaa tirtirto xiriir ah.
Si loo maareeyo xiriirrada aad Android la MobileGo Wondershare, furo Wondershare app MobileGo on your computer iyo xirmaan telefoonka aad Android dhex cable USB ama Wi-Fi.
Riix Xiriirada tab ee dhinaca bidix ee suuqa si ay u muujiyaan suuqa kala xiriir maamulka.
Riix Import, furmo maamulka xiriir ah. Waxaad heli doontaa 5 fursadaha: ka vCard, ka Outlook Express, ka Windows Live Mail, ka Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Outlook.
Dooro ikhtiyaarka aad jeceshahay. Daaqadda pop-up ka, dooro account xiriir kaas oo noqon kara SIM card ah, telefoon ama Gmail, Facebook, Twitter iyo xisaab kale.
Waxa kale oo aad isku diiwaan gelin kartaa in si Gmail, Facebook iyo xisaab kale inay dajiyaan xiriirada ka jiraan haddii aad qabto wax xiriir ah waxaa lagu kaydiyaa.
Si aad u dhoofiyaan xiriir la Wondershare MobileGo
Riix dhoofinta, furmo maamulka xiriir ah. Dooro oo dhan ama ay doortaan xiriirada aad rabto in aad u dhoofiyaan. Riix dhoofinta inay u dhoofiyaan xiriirada si aad u computer.
In dhibic ka hoos menu, waxaad arki doontaa 6 fursadaha: in vCard, in Outlook Express, in Windows Live Mail, in Windows Cinwaanka Book, in Outlook 2003/2007/2010/2013 iyo in file CSV.
Dooro ikhtiyaarka aad jeceshahay iyo habka bilaabi doonaan. Marka la dhameeyo, riix OK.
Waxa kale oo aad dhoofin karo xiriir ka Gmail, Facebook iyo xisaab kale sida aad telefoon ama computer ay si fudud u saxiixay in sida loo baahan yahay.
Top 6 SMS Tracker Softwares in lagu jaajuuso Mobile SMS
Top 15 3GP video Converter for Windows iyo Mac
Top 5 lagu bedelan karo MOBILedit
> Resource > Top List > 3 xal si xor ah u gurmad qorin si fudud